लिङ्ग परिवर्तन ! | MYAGDINEPAL
Home / राष्ट्रिय समाचार / लिङ्ग परिवर्तन !
लिङ्ग परिवर्तन !
अहिले विज्ञान प्रविधिको विकासले लिङ्ग परिवर्तनलाई सम्भव बनाइदिएको छ । चिकित्सा विज्ञानले प्राप्त गरेको उपलव्धीले अहिले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन सहज भएको छ । तपाईलाई थाहा छ लिंग परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्छ ? लिंग परिवर्तन गर्न शल्यक्रिया गर्नु पर्छ, त्यो पनि विदेशमा गएर । तर म्याग्दीकी एक किशोरीलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले लिंग परिवर्तन गरेर पूरुष बनाईदिएको छ ।
पिप्ले गाविस ९ कि सन्ध्या खत्री भाद्र १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा १६ वर्षपुगेपछि नागरिकता पाउन भनि निवेदन पेश गरिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सबै डकुमेन्ट पुगेपछि ४९–०१–७३–०१८२८ नम्बरको नागरिकता उनको हातमा थम्याईदियो । उनले सररस्र्ती नागरिकता हेरिन अनि नागरिकता पाएकोमा मख्ख पर्दै कोठातिर गईन् । जब घरमा पुगेर ज्ञानोदय माविका प्रअ तथा खत्रीका घरबेटी निलकण्ठ सुवेदीले नागरिकता हेरे उनी छक्क परे ।
सन्ध्या महिला हुन तर नागरिकतामा लिंग “पुरुष” लेखिएको छ । सुवेदीले प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणमा लापरबाही गरेको बताए । उनले प्रशासनले गर्ने स–साना कमजोरीले र लापरबाहीले जनताले दुःख पाएको बताए । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज आचार्यले कम्प्युटर टाईपमा मिस्टेक भएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–“काम गर्दा मिस्टेक हुन्छ, कम्प्युर टाईपमा मिस्टेक भएको होला, हामीकहाँ आउनु भयो भने सच्चाईदिन्छौ ।” कुनै पनि कुरामा निकै कडा प्रतिकृया र निकै उत्कृष्ठ काम गर्छु भन्नु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज अधिकारीले महिलालाई पुरष हो भन्दै सहिछाप गरेर पठाएछन् ।
तर हेर्दा सामान्य लागेपनि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरुको भने केही लापरबाही देखिएको छ । खत्रीले पाएको नागरिकतामा लिंग मात्र होईन अङ्ग्रजीमा हुने नामको स्पेलिङ समेत गलत रहेको छ । हुन त प्रशासनले नागरिकता पाएपछि एक पटक हेर्नु भन्छ तर जनताहरुले नागरिकता पाएभने प्रशासनको विश्वास गर्छन् र नहेरी घरतर्फ लाग्छन् । उनीहरुले नाम थर, जन्म मिति लगायतका कुराहरु हेर्छन् तर लिंगमा के लेखिएको छ भनेर कमै हेर्छन । यसमा जनताहरुको पनि कमजोरी रहेको छ । तत्कालै प्रशासनमा गलत भएको जानकारी गराउनपुर्छ । तर प्रशासनले पनि फाईल अनुसार एक पटक रुजु गराउँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता सामान्य कुरामा ध्यान नदिँदा जनताहरुले दुख पाउने गरेका छन् । जब काम पर्छ तब मात्र नागरिकता विग्रेको थाहा पाउँछन् र प्रशासनमा आउँछन् ।
प्रशासनले पहिले नै किन नहेरेको भनेर उल्टै प्रश्न गर्छ । हामीकहाँ लिंग मिस्टेक गरिएको, एउटै नम्बरमा २ वा सो भन्दा बढी नागरिकता वितरण गरिएका जस्ता धेरै उदाहरण छन् । जे होस् यसरी सिधै लिंग परिवर्तन गरिदिन त भएन् नी प्रजिअ ज्यू । नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने बेलामा एक पटक राम्रोसँग हेर्न गर्नु प¥यो है अब कि कसो ?
म्याग्दी अनलाईनबाट साभार गरिएको